Taliska Ciidanka Mareykanka Oo Sheegay In Mujaahidiinta Dhaalibaan Ay Hareereeyeen Afghanitan – Bogga Calamada.com
Taliska Ciidanka Mareykanka Oo Sheegay In Mujaahidiinta Dhaalibaan Ay Hareereeyeen Afghanitan
16 Sanadood oo Xulifada Mareykanku Hoggaaminayo ay awoodooda isugu geeyeen dalka Muslimka ah ee Afghanistan, hadane xamladoodii way guuldareysatay, gardarradoodii iyagey ku noqotay, kibirkoodiina waa jabay, garabkoodana ALLAH ayaa ka baxay.
Maanta oo dagaalka dalkaas uu qaan gaar dhaafay, Umadaha Saliibkuna ay naf iyo maal hureen, waxey xaaladdu ku biyo shubatay in magaalada caasimadda ah ee Kabul ay go’doosan tahay, askarta Jinsiyadaha kala duwan leh ee NATO ay awooddooda ugu weyn ku bixinayan sidii ay isu badbaadin lahaayeen.
La arag oo la maqal guuldarradan, laakin dadka reer Afghanistan oo lagu yaqaano diin jaceyl iyo gobannimo ayaa hore u lagday nidaamkii Soveit-ka, maantana waxey ALLAH FADLIGIIS isla wadadaas marsiinayaan xulifada shisheeyaha soo duulayaasha ah.
Xaaladdan murugada ee u soo hoyatay Kufriga ku duulay Afghanistan iyo dabadhilifyadooda ayaa waxaa iclaamiyay oo qirtay Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee Afghanistan, gaalka lagu magacaabo John Nikelson, kaas oo ka digay cawaaqib xumida dhici doonta.
Taliyuhu wuxuu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo ahaa kuwii ugu tunka weynaa isbaheysatada ku duushay Afghanistan in aaney lug uga bixi Karin magaalada Kaabul oo ay hadda maciin bideen isku socodkooda dhan in diyaarado ay adeegsadaan.
Arrinta xiisaha leh ayaa ah in xittaa taliyahan uu qirayo mooraal jabka weyn ee ku dhacay Huwanta ku duushay dalkaasi isagoo halkii uu sheegi lahaa qorshe dagaal uu si cad u sheegay howsha markaan ineysan ka badnaan doonin, isbad-baadin iyo madax biyo ka ceshad naflacaarinnimo muujinaya.
Sidoo kale madaxweynaha maamulka Kaabul Ashraf Gani oo wareysi siiyay warbaahin laga leeyahay Mareykanka ayaa iclaamiyay 3 maalmood inuu ku dumi doono maamulkiisu haddii Meesha uu ka baxo Mareykanka.
Wuxuu ku baaqay in maamulkiisa laga soo gaaro, isagoo ku cataabay in kumannaan geeri doon ah oo Taaliban soo diyaarisay ay ku soo zaxfinayaan magaalada caasimadda ah ee Kaabul.
Xoogaaga Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa hore u qabsaday dhul baahsan oo ka mid ah dalka Afghanistan, waxaana muuqaneysa sanadihii dhabar adeygga, thabaatka iyo Jihaadka, ribaadka iyo rafaadka in ALLAH uu ugu badalayo Nasri muuqda, taas oo noqon doonto Farxadda Muslimiinta,
ويومئد يفرح المؤمنون بنصر الله